एक आईफोनमा एक जेलब्रेक के हो र मैले एक प्रदर्शन गर्नुपर्छ? यहाँ के तपाईलाई जान्नु आवश्यक छ। - आईफोन
मलाई मार्न खोज्ने मानिसहरुको सपना
आईफोन5इन्टरनेट काम गर्दैन
मेरो आईफोन किन क्र्यास भइरहन्छ?
मेरो आईफोन recovery रिकभरी मोड मा अड्किएको छ
आईफोन4चार्जर पोर्ट काम गर्दैन
एक आईफोनमा एक जेलब्रेक के हो र मैले एक प्रदर्शन गर्नुपर्छ? यहाँ के तपाईंलाई थाहा पाउनु आवश्यक छ।
तपाई आफ्नो आईफोन जेलब्रेकिंग गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई अझ बढि जान्न चाहानुहुन्छ। एक आईफोन जेलब्रेकिंग जोखिमपूर्ण हुन सक्छ र सामान्यतया लाभहरू सम्भावित परिणाम भन्दा बढी हुँदैन। यस लेखमा, म तपाईंलाई भन्नेछु यो एक आईफोन मा एक जेलब्रेक प्रदर्शन भनेको के हो र वर्णन गर्दछ किन तपाईं सायद यो गर्नुहुन्न।
यो एक iPhone जेलब्रेक के मतलब के हो?
साधारण शब्दहरूमा, क जेलब्रेक आईओएसमा निर्मित प्रतिबन्धहरू हटाउनको लागि जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो आईफोन परिमार्जन गर्दछ तब, अपरेटि system प्रणाली जुन आईप्याडहरू, आईपडहरू, र आईफोनहरूमा चल्दछन्। 'जेलब्रेक' भन्ने शव्द आईपल प्रयोगकर्ताले एप्पलले उनीहरूलाई बाध्य पार्ने सीमाको 'जेल' बाट अलग गरिरहेको छ भन्ने धारणाबाट आएको हो।
म मियामी मा विदेशीहरु को लागी काम गर्दछु
के मैले मेरो आईफोन जेलब्रेक गर्नुपर्छ?
अन्तमा, तपाईं तपाईंले आफ्नो आईफोनलाई ब्रेक गर्न वा नदिन निर्णय गर्नुपर्दछ। जे होस्, म तपाईंलाई लाभ र परिणामको बारेमा सूचित गर्न चाहान्छु यदि तपाईंले यस मार्फत जाने निर्णय गर्नुभयो भने। यदि तपाईं एक विशेषज्ञ हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई कडा सिफारिश गर्दछु कि तपाईं छैन तपाईको आईफोन जेलब्रेक गर्नुहोस् किनकि त्यसो गर्दा राम्रा चीजहरू महँगो हुन सक्छ।
एक iPhone जेलब्रेक को पेशेवरहरु
मैले पहिले पनि भनेको छु, जब तपाईं जेलब्रेक गर्नुहुन्छ, तपाईंको आईफोन आईओएसको प्रतिबन्धको लागि बाध्य हुनेछैन। तपाईं यस रूपमा चिनिने वैकल्पिक अनुप्रयोग स्टोरबाट धेरै नयाँ अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ साइडिया। धेरै अनुप्रयोगहरू जुन तपाई साइडियाबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको आईफोनलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिनुहुन्छ केवल सम्भावित मार्गहरूमा जेलब्रोकन आईफोनमा।
Cydia अनुप्रयोगहरूले तपाईंको आइकनहरू परिवर्तन गर्न, तपाईंको आईफोनको फन्ट परिवर्तन गर्न, तपाईंको अनुप्रयोगहरू लक गर्न, र तपाईंको पूर्वनिर्धारित वेब ब्राउजरलाई क्रोम वा फायरफक्समा परिवर्तन गर्न सक्दछ। जबकि यी अनुप्रयोगहरू शान्त हुन सक्छन् र तपाईंको आईफोनमा केही थोरै प्रकार्यता थप्न सक्छन्, तिनीहरू पनि हुन सक्छन् धेरै खतरनाक एप्पलले आईओएसमा बनाउने धेरै प्रतिबन्धहरू तपाइँ र तपाइँका लगतहरूलाई हैकरहरूबाट बचाउनको लागि हो - तपाई मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रतिबन्ध गर्न मात्र होइन।
विडम्बनाको कुरा, एप्पल जेलब्रेक समुदायलाई ध्यान दिन्छ
प्रत्येक पटक एप्पल आईओएस को एक नयाँ संस्करण जारी, यो एक उत्सुक घटना हो: सुविधाहरू जुन मूल रूपमा केवल आईफोन जेलब्रेक गरेर उपलब्ध थिए अब हो भित्र निर्मित आईफोन अपरेटिंग सिस्टममा। एप्पल जेलब्रेक समुदाय के गर्छ ध्यान दिन्छ र लोकप्रिय जेलब्रोन सुविधाहरू नयाँ आईफोन मोडेलमा अनुकूलन गर्दछ। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
एप्पलको लोकप्रिय उदाहरण लोकप्रिय साइडिया अनुप्रयोग लिने र यसलाई नियमित आईफोनमा समाहित गर्ने कन्ट्रोल सेन्टरमा फ्ल्यासलाइट हो। आईफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई फ्ल्यासलाइट अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दा उनीहरूको आईफोनको पछाडिको प्रकाश सक्रिय पार्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन सामान्यतया खराब कोडेड, ब्याट्री लाइफमा कोरिएको थियो र विज्ञापनहरूले भरिएको थियो।
प्रतिक्रियामा, जेलब्रेकिंग समुदायले यसलाई ड्रपडाउन मेनूमा एकीकृत गरेर आईफोनको पछाडिको प्रकाश लाईन्ट गर्नको लागि यसलाई सजिलो बनाउनको लागि एक तरीका फेला पार्‍यो।
एप्पलले सजिलैसँग पहुँचयोग्य फ्ल्यासलाइटको लोकप्रियता देख्यो, त्यसैले तिनीहरूले यसलाई नियन्त्रण केन्द्रमा समाहित गरे जब तिनीहरूले आईओएस released जारी गरे।
एक लोकप्रिय Cydia अनुप्रयोगलाई मानक आईफोन सुविधामा अनुकूलन गर्ने एप्पलको अर्को उदाहरण हो उनीहरूले प्रस्तुत गर्दा एप्पल नाइट शिफ्ट आईओएस .3 ..3 को साथ। एप्पल नाइट शिफ्टले तपाईको आईफोनको घडी प्रयोग गर्दछ डिस्प्लेको र colorsहरू स्वचालित रूपमा निलो बत्तीमा फिल्टर गर्नका लागि, जुन रातमा निदाउन अझ गाह्रो हुने देखाइएको छ।
आईओएस .3 ..3 भन्दा पहिले, निलो बत्ती हटाउनका लागि र filter्ग फिल्टर समायोजित गर्ने एक मात्र तरिका भनेको तपाईंको आईफोनलाई ब्रेक गरेर एक अनुप्रयोग स्थापना गर्नु थियो। Auxo ।
प्रो सुझाव: तपाईं गएर नाइट शिफ्ट खोल्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स -> प्रदर्शन र चमक -> रात शिफ्ट र अर्को पनी स्विच गर्न ट्याप गर्नुहोस् अनुसूचित वा म्यानुअली भोलि सम्म सक्षम गर्नुहोस्।
जेलब्रेकहरू समयको साथ अप्रासंगिक हुन्छन्
प्रत्येक प्रमुख आईओएस अपडेटको साथ, त्यहाँ आईफोनमा जेलभ्रेक प्रदर्शन गर्न कम र कम फाइदाहरू छन्। एप्पल आफ्नो ग्राहक आधार संग सम्पर्क मा छ र अक्सर जेलब्रेकर बीच सबै भन्दा लोकप्रिय सुविधाहरु लिन र एक मा आईफोन मा उनलाई सम्मिलित हुनेछ। सुरक्षित र सुरक्षित बाटो
आईफोन ५० प्रतिशतमा मर्छ
एक आईफोन जेलब्रेकिंगको भान
पहिले, तपाइँले यो जान्नुपर्दछ कि जब तपाइँ एक आईफोनमा एक जेलब्रेक प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यो आईफोनको वारेन्टी अवैध छ। एक एप्पल टेक तपाइँ गलत गर्न को लागी एक जेलब्रेक ठीक गर्न मद्दत गर्दैन। निष्पक्ष हुनका लागि, एक DFU पुनर्स्थापना सामान्यतया तपाइँको आईफोन बाट एक जेलब्रेक हटाउन सक्छ, तर त्यो सधैं एक निश्चित फिक्स हुन्छ।
जेलब्रेकको ट्रेस अझै बाँकी छ
पूर्व एप्पल टेक डेभिड पायएटले मलाई जानकारी गराए कि एप्पलसँग आईफोनको कुनै पनि हालतमा जेलब्रेक भएको छ कि छैन भनेर जान्ने तरिका छ, तपाईले एक DFU पुनर्स्थापना गरेपछि पनि। मैले एक पटक एउटी आइमाईसँग काम गरें जसको नातिले उनको आईफोन S जी एस बिग्रेको थियो। यद्यपि उनले DFU उनको फोनलाई मूल अवस्थामा पुनःस्थापित गरे पनि, iOS अपडेटले त्यस फोनका सबै मोडेलहरू ब्रीक गर्‍यो जुन कहिले जेलब्रोकन भएको थियो। I DFU उनको आईफोन फेरि स्टोरमा पुन: संग्रहित गर्‍यो, तर त्यसले काम गरेन।
('ब्रेकिking' एक जेलब्रेकरको शब्द हो जब के हुन्छ जब आईफोन खोल्दैन। के बारे मा मेरो लेख पढ्नुहोस् कसरी एक bricked आईफोन तय गर्न थप सिक्न।)
जब म व्यवस्थापनसँग कुरा गर्थे, मलाई सूचित गरियो कि जे भए पनि एक हो स्याऊ अपडेटले उनको आईफोन ईट गर्‍यो, यो वारेन्टी अन्तर्गत कभर हुने थिएन किनकि विगतमा फोन जेलब्रोन भएको थियो। जेलब्रेकिंगमा तपाईंको ग्यारेन्टीमा दीर्घकालीन रमफिकेशन हुन सक्छ, र तपाईंको पाकेटबुकमा - त्यसैले सावधान हुनुहोस्।
अर्को मुख्य कारण यो हो कि किन तपाईले सिफारिश गर्नु भएको छ कि तपाईले आफ्नो आईफोनलाई ब्रेक नगुन्नु नै यो हो कि तपाईलाई धेरै नराम्रो अनुप्रयोगहरू र मालवेयर मालवेयर सफ्टवेयर हो जुन तपाईंको आईफोनको अपरेटिंग प्रणालीलाई जानाजानी नोक्सान गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। अनुप्रयोग स्टोरसँग अनुप्रयोगहरू र सेफगार्डहरूको लागि धेरै उच्च स्तरहरू हुन्छन् जसले तपाईंको आईफोनलाई मालवेयर र भाइरसहरूबाट सुरक्षा दिन्छ।
एप्पलले हरेक अनुप्रयोगलाई तिनीहरू 'स्यान्डबक्स' भन्ने कलमा राख्दछ भन्ने कारण प्रत्येक अनुप्रयोगको बाँकी आईफोनमा सीमित पहुँच छ।
जब तपाईं अनुप्रयोग स्टोरबाट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको आईफोनको अन्य भागहरू पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ, तपाईंलाई सन्देश जस्तै प्रोम्प्ट गरिनेछ। 'यो अनुप्रयोग तपाइँको सम्पर्कहरू पहुँच गर्न चाहन्छ' त्यसोभए तपाईंसँग व्यक्तिगत जानकारीमा छनौट अनुमति वा अस्वीकार गर्ने अवसर हुन सक्छ। यदि तपाईं ठीक हिट गर्नुहुन्न भने, अनुप्रयोगले त्यो जानकारी पहुँच गर्न सक्दैन।
पी एन्ड जी कूपन पुस्तक
जेलब्रेकिंगले यी प्रतिबन्धहरूलाई हटाउँदछ, त्यसैले साइडियाबाट अनुप्रयोग (एप स्टोरको जेलब्रेकरको संस्करण) ले तपाईंलाई यो सन्देशको साथ प्रोम्ट गर्न सक्दैन र तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको जानकारी चोर्न सक्छ।
जेलब्रोकन अनुप्रयोगहरूले तपाईंको फोन कलहरू रेकर्ड गर्न, तपाईंको सम्पर्कहरू पहुँच गर्न, वा तपाईंको फोटो टाढा टाढा सर्भरमा पठाउन सक्दछ। त्यसोभए, जबकि सिडियाले तपाईंलाई धेरै अनुप्रयोगहरूमा पहुँच दिन्छ, तिनीहरू मध्ये धेरै खराब छन् र तपाईंको आईफोनको साथ धेरै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
सफ्टवेयर अपडेटले काम गर्दैन
अन्तमा, यदि तपाईंसँग जेलब्रोन आईफोन छ भने, तपाईंले कुनै पनि समयमा एप्पल अपडेट हुने आईओएस समस्याहरूमा पर्नुहुनेछ। प्रत्येक आईओएस अपडेटको लागि, त्यहाँ सम्बन्धित जेलब्रेक अपडेट छ। यी जेलब्रेक अपडेटहरूले आईओएस अद्यावधिकहरू समात्न हप्ताहरू वा महिनौं लिन सक्दछ, जुन तपाईंको आईफोनलाई पुरानो अपरेटि system प्रणालीको साथ छोडिन्छ।
के यो मेरो आईफोन जेलब्रेक कानूनी हो?
एक आईफोनमा एक जेलब्रेक प्रदर्शन को वैधता एक खैरो क्षेत्र को एक बिट छ। प्राविधिक रूपमा, यो तपाइँको आईफोन जेलब्रेक गर्न अवैध होइन, तर एप्पल दृढ निरुत्साहित आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले त्यसो गर्नबाट। यसबाहेक, तपाईंको आईफोनलाई ब्रेक गर्नु भनेको आईफोन प्रयोग गर्नको लागि तपाईं सहमत हुनुभएको प्रयोगकर्ता सम्झौताको सर्तहरूको उल्ल .्घन हो। मैले सुरुमा भनें, यसको मतलब यो हो कि एप्पल कर्मचारीले आईफोन फिक्स गर्दैन जुन जेलब्रोकन भएको छ।
यद्यपि, केहि अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंले साइडियाबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यसले तपाईंको आईफोनमा अवैध कामहरू गर्न मद्दत गर्दछ। यसले अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई संगीत, चलचित्रहरू, वा अन्य मिडिया चोरी गर्न दिनेछ। त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्नो आईफोन जेलब्रेक गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, सावधान रहनुहोस् कुन साइडिया अनुप्रयोग तपाईंले डाउनलोड गर्नुहुन्छ। गलत अनुप्रयोगहरू सक्छ तपाईलाई कानुनी समस्यामा पार्नुहोस्!
जबसम्म तपाईं सँग चारै तिर खेल्नको लागि अतिरिक्त आईफोन छैन, आफ्नो आईफोन जेलब्रेक नगर्नुहोस्। जब तपाईं आईफोनमा जेलब्रेक गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो आईफोन - तपाईंको वालेटमा गम्भीर क्षति गर्ने जोखिममा थोरै कार्यक्षमता थप्दै हुनुहुन्छ। यो लेख पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद, र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं यसलाई आफ्नो मिडिया मा आफ्नो साथीहरु र परिवार संग साझा गर्नुहुनेछ!